एसईएमओ का Semalt आर्ट र कसरी राम्रो डिजाइन तपाइँको रैंकिंग मद्दत गर्दछ
धेरै वेबमास्टरहरू, copywriters, र व्यवसायहरूको लागि, एसईओ एक विज्ञान भन्दा कला भन्दा बढी हो। त्यहाँ केहि सटीक विधिहरू छन् जहाँ पुग्नको लागि छ, तर खराब डिजाइनको साथ एक वेबसाइट स्वचालित रूपमा रैंकिंगमा आउँछ।
मलाई यो कसरी थाहा हुन्छ?
म त्यहाँ थिएँ। मैले एक कुरूप साईट सिर्जना गरेको छु जुन कहिँ पनि गएको छैन। धेरै किशोर किशोरीहरु जसले कम्प्युटरमा टेक्नोलोजीको रूपमा झुकाएका छन् पहुँच गर्दछ। मुद्दा यो हो कि कोही पनि एक मिनेट भन्दा बढि मेरो वेबसाइट हेर्न इच्छुक थिएनन्। सही रूपमा प्रयोग नगरेको खूनमा हरियो रमाईलो र color्ग हुँदैन।
जे होस्, हामी वेबसाइटहरूका केही उदाहरणहरू पार गर्नेछौं जुन राम्रो एसईओ को लागी उत्कृष्ट डिजाइन पछाडि प्रमाणित कथाहरू छन्।
पाँच उत्तम वेबसाइट लेआउटहरू बाहिर त्यहाँ
पहिले, हामी तपाईले छनौट गर्न सक्ने विभिन्न वेबसाइट लेआउटहरूको एक छोटो सूची को लागी जानेछौं। यी सबै क्षेत्र मा सफलता साबित भएको छ। तिनीहरूको सफलता तपाईंले सिर्जना गर्न खोज्नु भएको वेबसाइटमा निर्भर गर्दछ।
वेबसाइटहरूमा तपाइँले बोर्ड भरि हेरेको एक सफल उदाहरण "पूर्ण फोटो" विधि हो। सामान्यतया, तपाईले बोल्ड टेक्स्ट पृष्ठभूमिमा फोटो वा भिडियो अधिव्यापन देख्नुहुनेछ। पृष्ठ गतिशील हुनको लागि व्यवस्थित गर्दछ जबकि यो पनी पढ्न सजिलो छ पक्का गर्दै।
तपाईंले Semalt पृष्ठमा यसको उदाहरण देख्न सक्नुहुनेछ। पछाडिको तस्बिरले पाठलाई मिल्दैन। यो प्राविधिक भिडियो फोटोग्राफर र फोटोग्राफरहरूको लागि उपयुक्त छ जुन उनीहरूको पोर्टफोलियो तुरून्त नमूना बनाउन चाहन्छ।
Z- आकार वेबसाइट वेबसाइट
जो मानिस न्यूनतम डिजाइनको साथ पेज बनाउन चाहन्छन्, Z- आकारको वेबसाइट उत्कृष्ट विकल्प हो। हेर्नुहोस् कसरी पाठले तपाईंको लाइनलाई बाँया, दाँया, र पछाडि पुन: मार्गदर्शन गर्दछ। वेबसाइटहरूले ठूलो छविहरूको साथ यो काम गर्न सक्दछ।
यस प्राविधिक प्रभावकारी डिजाइन गर्न मनपराउनेहरूको लागि उत्कृष्ट छ। यो बोल्ड हुनुपर्दछ र यसमा सीमित शब्दहरू हुनुपर्दछ, तर ती शब्दहरूले तपाईलाई के अपेक्षा गर्ने भनेर बताउनु पर्छ। फेसबुकले यसलाई ठूलो सफलताका साथ प्रयोग गरेको छ।
जो तपाईको अनुहारमा हिट हुने ठूलो छवि बिना पूर्ण फोटो वेबसाइटको सीधा प्रभाव चाहान्छन् तिनीहरूको लागि, एकल स्तम्भ वेबसाइट तपाईको रोजाई हो। । यो जानकारीपूर्ण वेबसाइटहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प हो जुन सजिलै पाठ परिमार्जन गर्न सक्षम हुन चाहन्छ।
अधिकांश ब्लग ढाँचाहरूले यसलाई प्रयोग गर्दछन्। तपाईं यो ढाँचा फीडलिको पृष्ठमा देख्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं यसलाई नयाँ कोठामा नवीनतम राख्नुहोस्। धेरै साधारण वेबसाइटहरूले यो ढाँचा प्रयोग गर्छन्।
फिक्स्ड नेभिगेसन वेबसाइट
एक वेबसाइट विचार गर्नुहोस् जुन एक अनम्याभिगेशन नेभिगेसन बार छ। तपाईं जहाँ जानुहुन्छ यो पनी तपाईं पछ्याउनुहुन्छ। यो एक स्थिर नेभिगेसन वेबसाइट को रूपमा परिचित छ।
यो वेबसाइटमा नेभिगेसनमा सजीलो पहुँच गर्न चाहनेहरूको लागि यो अविश्वसनीय रूपले उपयोगी छ। यसले प्रयोगकर्तालाई स्क्रोल गर्न आवश्यकबाट रोक्दछ केही पनि भएमा। गुगलले यसको प्रयोग खोजी पट्टीलाई सँधै पहुँचमा राख्नको लागि गर्दछ, किनकि यो तिनीहरूको नेभिगेसनको रूप हो।
यी सँधै मोबाइल उपकरणहरूमा राम्रो अनुवाद गर्दैन। यस डिजाइनको चयन गर्दा सावधान हुनुहोस् यदि तपाईं मोबाइल अप्टिमाइजेसनमा जोड दिन चाहनुहुन्छ भने।
यदि तपाईले कुनै वेबसाइटलाई विशाल बायाँ आधा र सानो दाहिने आधा देख्नु भएको छ भने, यो असममित डिजाइन हो। यो डिजाइन ती मानिसहरुका लागि अपील गरिएको छ जो सजिलै नेभिगेसन, एक ट्रेन्डिंग शीर्षक सेक्सन, वा अगाडि धेरै सामग्री राख्नु पर्छ।
Bundfeed, ट्रेन्डिंग शीर्षकहरूको एक राजा, यो तिनीहरूको फाइदाको लागि प्रयोग गर्दछ। यसले तिनीहरूलाई समाचारको बहु स्रोतहरू, ट्रेन्डिंग शीर्षकहरू, र सानो स्पेसमा नेभिगेसन बार राख्न अनुमति दिन्छ। यो सबै भारी भन्दा बढि गरिएको छ।
राम्रो डिजाइनले एसईओलाई सुधार गर्ने पाँच तरिकाहरू
अब जब हामीसँग सुरु गर्नका लागि बलियो डिजाइनहरूको सूची छ, हामी ती प्रभावी एसईओ मा लागू गर्न सक्दछ। एकसँग विश्वमा उत्तम गुणस्तरको सामग्री हुन सक्छ, तर कसैले पनि यसलाई बदसूरत वेबसाइटमा पढ्न चाहँदैन। नतिजाको रूपमा, यहाँ डिजाइन र एसईओ समावेश गर्नका लागि पाँच विचारहरूको सूची छ।
एक साइटम्याप एक नेभिगेसनल चार्ट हो जसले अनुमति दिन्छ तपाईं आफ्नो वेबसाइट को एक हिस्सा बाट अर्को प्राप्त गर्न। "फिक्स्ड नेभिगेसन" डिजाइनसँग ठोस साइटम्यापको उत्तम उदाहरण हुन सक्छ। यस डिजाइन अन्तर्गत, यो स्पष्ट छ कि तपाईंको वेबसाइटको प्रत्येक सेक्सनले के गर्छ। यसले त्यहाँ पुग्न पनि सजिलो बनाउँदछ।
निश्चित नेभिगेसन बार बिना नै, एक राम्रो साइटम्याप तपाइँको आगन्तुकहरूलाई उनीहरूले चाहिने अंशमा मार्गदर्शन गर्न आवश्यक पर्दछ। गुगलले यसको पनि कदर गर्दछ, तपाईंको वेबसाइटलाई क्रल गर्न सक्षम हुँदैं यसले यसको एसईओ सुधार गर्दछ। टुटेका लिंक र रिडिरेक्शनले तपाईंको साइटम्याप भंग गर्दछ।
मोबाइल मैत्री अनुभव सिर्जना गर्दै
हाम्रो अन्य ब्लगमा, हामी यसमा अझ विस्तारका साथ जान्छौं। तर एक मोबाइल अनुकूल मैत्री अनुभव को लागी तपाइँको वेबसाइट को सम्भावित को लागी बहु प्लेटफार्महरु को लागी राम्रो डिजाईन छ। यदि साइट गुगल क्रोमको रूपमा एन्ड्रोइड फोनमा ठ्याक्कै राम्रो देखिन्छ भने, तपाईंसँग एक विजेता छ।
यसले तपाईंको वेबसाइटमा धेरै स्थानहरूमा बारम्बार पहुँच गर्ने मानिसहरूलाई प्रदान गर्दछ। यो। पहिलो पटक आगन्तुकहरूको लागि, यसले उनीहरूलाई यो विचार दिन्छ कि तपाईलाई थाहा छ तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ।
थप विवरणहरूको लागि मोबाईलमैत्री वेबसाइट बनाउन हाम्रो गाइड पढ्न नबिर्सिनुहोस्। हामीले चयन गरेका धेरै डिजाइनहरूमा भरपर्दो मोबाइल अनुप्रयोगहरू छन्।
गुगलको प्राय: खोज इन्जिन पढ्न योग्य सामग्री, मेटा वर्णन र अधिकारको संयोजनमा निर्भर गर्दछ। जबकि उत्कृष्ट डिजाईनले यो प्रदर्शन गर्दछ, खराब क्रमबद्ध गरिएको सामग्री डिजाइनको एक पक्ष हो।
गुगल तालिका, संख्यागत सूचि, हेडिंग ट्याग, र संयोजनको भारीमा निर्भर गर्दछ। शीर्षक राम्रो सामग्री पाउन। यो विशेष गरी फिचर स्निपेट्स सेक्सनमा सत्य छ, किनकि तिनीहरू राम्ररी सोचविचार गरेका उत्तरहरू र स्पष्ट सामग्रीमा भर पर्छन्। यदि तपाईंसँग कसैको प्रश्नको उत्तर छ भने, यो माथिल्लो १० निलो लिंकहरू माथि चित्रित स्निपेटहरू सहित देखा पर्न सक्छ।
गुगलको भर्खरको देव ब्लगहरू एसईओ मा नवीनतम प्रवृत्ति मा एक लगातार अपडेट तालिका प्राप्त गर्न। तपाइँ Semalt को ब्लग अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो परिप्रेक्ष्य प्राप्त गर्न।
द्रुत गाईडका रूपमा H2, H3, र H4 ट्यागलाई क्रमबद्ध गर्ने विधिको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। बुलेट गरिएको र गन्ती गरिएको सूची समावेश गर्नुहोस् मानिसहरूलाई जानकारीको संक्षिप्त भागहरू प्रदान गर्न। निर्दिष्ट शीर्षक छ कि मानिसहरूलाई तपाइँको सामग्रीबाट ती केहि आशा नगरीकन अपेक्षा गर्न सक्दछ।
उपयुक्त गुणवत्ता छविहरू प्रयोग गर्नुहोस्
अधिकांश वेबसाइटहरूलाई MB०० एमबी छविको आवश्यक पर्दैन। जबकि ठूला फाईलहरू उच्च गुणस्तरको हुन्छन्, ढिलो लोडिंग अनुक्रमले तपाईंको वेबसाइटलाई आकर्षक बनाउन मद्दत गर्दैन। अर्को तर्फ, यदि इटालीको लागि तपाईंको छुट्टीको तस्विर दलियाको थाल जस्तो देखिन्छ भने राम्रो रिजोलुसन प्रयोग गर्नुहोस्।
मानक रिजोलुसन, गुणहरू बारे सचेत रहनुहोस् , र छवि को प्रकार तपाइँको को आला मा। तपाईं अर्को सामान्य वेबसाइट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ मात्र राम्रो सामान्य विचार प्राप्त गर्नका लागि। तर ठोस सुरुवात एक मिड-क्वालिटी JPG हो कि त्यहाँ उच्च रिजोलुसन छ जुन दर्शकले छविमा पहुँच गरेको ठाउँमा निर्भर गर्दै समायोजन गर्न सकिन्छ।
मोबाइल उपकरणसँग उच्च रिजोलुसन छविको आवश्यकता पनि कम छ। साथै, तपाइँको तस्वीरहरू सोशल मीडियामा मात्र भण्डारण गर्नबाट बच्नुहोस्। फेसबुक र ट्विटरमा चित्रहरूको गुणस्तर घटाउने खराब बानी छ किनकि तिनीहरूलाई पुन: डाउनलोड गर्नुहोस्।
जब यो जस्तो लाग्न सक्छ। डिजाईनसँग केहि गर्नुपर्दैन, एक सक्षम कम्पनीलाई थाहा छ कि यसले के गरिरहेको छ त्यसले एक राम्रो वेबसाइट पनि पाउनेछ। यदि तपाईंको वेबसाइट someone ० को दशकको अन्तमा कसैको तहखानेमा बनेको जस्तो देखिन्छ भने, तपाईं कुनै पनि रूपान्तरण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न।
राम्रो एसईओ सजिलैसँग आउँछ- क्रल गर्न सकिने वेबसाइट जुन व्यक्ति भ्रमण गर्न चाहन्छन्। एक वेबसाइट जुन क्रल गर्न सजिलो हुन्छ आफैंले हिटहरू पाउने छैन, जसरी कार्यात्मक डिजाइन भएको साइटले ट्राफिक प्राप्त गर्दैन। गुगल टपको लागि लडाई जित्न तपाईंसँग दुबै चीज हुनु आवश्यक छ।
विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, डिजाईन स्वाभाविक रूपमा तपाईंको खोजीयोग्यतालाई सुधार्न काम गर्दछ। पाठ ढाँचाहरू र उच्च-गुणवत्ता छविहरू ती दुई उदाहरण हुन्। यसले व्यक्तिलाई तपाइँको वेबसाइटमा अधिक पटक लिंक गर्न पनि बनाउँदछ।
के यी केवल राम्रा डिजाइनहरू हुन्?
राम्रोको लागि त्यहाँ एक सही उत्तर छैन। डिजाईन जब कलाको कुरा आउँछ, दर्शकको आँखामा सुन्दरता हुन्छ। स्थिरता र स्पष्टताको लागि त्यहाँ केही मानक सम्झौता छ, तर उत्तम वेबसाइटहरूले ल्यान्डस्केपको आविष्कार र परिवर्तन गर्दछ।
म कती टाढा जानु पर्छ?
जब हामी Semalt मा रचनात्मकतालाई प्रोत्साहित गर्छौं, वेबसाइटहरू अमूर्त कलाको दुनियामा राम्रो देखिन्छ। तपाईं धेरै सफल वेबसाइटहरू देख्नुहुन्न जुन भूमिगत हो जुन उनीहरू के गर्न चाहन्छन्। जबकि कलाकृति रचनात्मक हुन सक्दछ, पाठहरू प्रत्यक्ष हुनुपर्दछ, कल-टु-एक्शन स्पष्ट हुनुपर्दछ, र लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्दछ।
SEO र डिजाइन जटिल प्रक्रिया हुन सक्छ। धेरै जटिल टुक्राहरूको लागि, एसईओ विशेषज्ञसँग कुरा गर्न Semalt मा हाम्रो टीममा पुग्नुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंको लागि अर्को उत्तम चरण थाहा छ। आज गुगलमा पुग्नको लागि उनीहरूको उपलव्ध उत्पादनहरूका बारे बढि जान्नका लागि पुग्नुहोस्।